Fanesorana minisitra, fitombon’ny tranga tratry ny ‘covid-19’ sy maty, fanalefahana ny fihibohana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Anisan’ny nanamarika iny herinandro iny ny fanesorana ny minisitry Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana teknika ary ny Fanofanana araka asa, Rijasoa Josoa Andriamanana, tamin’ny 4 jona ary nanaovany ny famindram-pahefana tamin’ny minisitra mpisolo toerana, Elia Beatrice Assoumacou, tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Ao anatin’ny fivoriana ara-potoana amin’izao ny parlemantera (depiote sy loholona), ka anisan’ny saika hametraham-panotaniana taminy ny momba ilay 8,4 miliara voalazany fa saika nividianana ‘bonbons’ ho an’ny mpianatra hanarahana ny fisotroana ilay tambavy CVO, saingy izy noesorina io. Hita tamin’ny sary navoakan’ny gazety samihafa ny fizarana ‘bonbons’ tamin’ny mpianatra, hita ihany koa tamin’ny tambajotra sosialy.
Eo amin’ny ara-panahy, dia mitohy ny fotoam-bavaka tamin’ny haino aman-jery noho ny tsy mbola fisokafan’ny fiangonana rehetra, tamin’ny alahady 7 jona 2020, fankalazana ny fetin’ny Trinite Masina sy fetin’ny reny, ary fanamarihana ny Andro maneran-tany faha 54 ho an'ny Fifandraisan'ny mpiara-belona ho an’ny EKAR eto Madagasikara. Nisy ny hafatra nataon’ny filohan’ny Vaomieran’ny eveka momba ny Fifandraisan’ny mpiara-belona, Mgr Fulgence Rabemahafaly, nalefa tamin’ny radion’ny diosezy samihafa, niainga avy ao amin’ny RDB, mifandraika amin’izay fanamarihana izay, araka ny hafatry ny Papa Fransoa mitondra ny lohahevitra hoe « ‘Mba ho tantarainao amin'ny zanaka aman-jafinao’ (Eks 10, 2) Lasa Tantara ny fiainana ». Nisy koa ny famoahana azy tao amin’ny pejy Facebook an’ny Vaomieran’ny Eveka ho an’ny Fifandraisan’ny mpiara-belona. Nandrohy sy nizara izany ny sokajin’olona samihafa. Navoaka tamin’ny 24 janoary 2020, fetin’i Md François de Sales, mpiaro ny mpanao gazety io hafatra io. Hatramin’ny fihibohana, dia nisy hatrany ny lamesa niainga tao amin’ny katedraly Andohalo nampitaina tamin’ny radio sy televiziona IBC, nitarika izany ny eveka mpanampy Mgr Pascal Andriantsoavina. Ny RDB dia mampita ny lamesa miainga avy ao amin’ny foibeny ka heno amin’ny diosezy maro manerana ny Nosy. Misy koa ny Diosezy hafa mandefa ny lamesa tarihin’ny evekany, ao amin’ny tambajotran-tserasera. Ny FFKM ihany koa dia manao fiombonam-bavaka hatrany isaky ny alahady, ka ampitaina amin’ny TVM.
Raha miala miandalana amin’ny fihibohana ny firenena sasany eran-tany toa ny any Eoropa, dia misy ny mbola ao anatiny tanteraka na mampihatra ampahany ny fihibohana noho ny fitomboan’isan’ireo tratry ny tsimokaretina sy mamoy aina. Maneran-tany dia maherin’ny 400 000 ireo namoy ny ainy tamin’ny 8 jona (maherin’ny 375 000 tamin’ny 2 jona) ary mananika ny 7 tapitrisa ireo mitondra ny tsimokaretina (6,2 tapitrisa tamin’ny 2 jona), araka ny antontanisa navoakan’ny Hopitaly amerikanina Johns-Hopkins, hita amin’ny tranonkala.
Ho an’i Madagasikara, araka ny tatitra nentin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny ‘covid-19’ tamin’ny 9 jona 2020, halefa amin’ny TVM sy RNM ary ny radio sy fahitalavitra tsy miankina samihafa noho ny fanaovana ‘réquisition’ azy ireo, dia 1138 ireo olona mitondra ny tsimokaretina (908 tamin’ny 3 jona), miisa 14 106 ireo fitiliana natao nanomboka tamin’ny 19 marsa ka hatramin’ny 7 jona 2020 (12 192 hatramin’ny 2 jona 2020). Marihina hatrany fa vokatry ny fitiliana natao ny omalin’ny amoahana ny tarehimarika no aroson’ny mpitondra teny ofisialy momba ny covid-19 (8 ora maraina hatramin’ny 6 ora hariva). Miisa 274 no sitrana nambara tamin’ny 9 jona (195 tamin’ny 3 jona) ary 856 ireo manaraka fitsaboana (707 tamin’ny 3 jona), miisa 9 ireo atao hoe ‘forme grave’ ary 9 namoy ny ainy tamin’ny 9 jona nanambarana ny isa. Tsy mitsaha-manentana hatrany ny Profesora Vololontiana amin’ny fanarahana ny fepetra fisakanana ny aretina toy ny fanaovana ‘masque’ sy fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony, ny fanajana ny elanelana iray metatra amin’ny fivezivezena, ary ny tsy fivoahana ny trano raha tsy misy antony lehibe. « Mbola ao anaty ady isika », hoy ny teny famerimberin’ity Profesora mpitondra teny momba ny ‘covid-19’ ity.